तिनीहरू गलत छन् ... तपाईं पर्याप्त कुरा गर्दै हुनुहुन्न | Martech Zone
बुधबार, जुन 24, 2015 बिहीबार, जुन 25, 2015 Douglas Karr
केहि वर्ष अघि मैले धेरै मानिसहरूलाई ट्विट गर्ने बिरूद्ध सल्लाह गर्ने थिए। वास्तवमा यो मुख्य कारण थियो किन मानिसहरूले तपाईंलाई ट्विटरमा अनफलो गरे। केहि बर्ष अगाडि अगाडि र ट्विटर प्रति घण्टा केही चिप्सबाट ओटोपेस्टहरू, नक्कली खाताहरू, स्प्यामरहरू, र वेगको जानकारीको बहिरा गर्जनमा गएको छ जुन कुनै पनि सहज स्तरमा पचाउन सकिँदैन।
तथ्य यो हो, यदि तपाईं ठूलो कोठामा ध्यान दिन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले या त आवाज उठाउनु पर्छ वा आफैलाई दोहोर्याइरहनु पर्छ। ट्विटर एक चर्को कोठा हो ... एकदम चर्को स्वरमा।
म पढ्न जारी राख्छु नियमहरू ट्विटर अनलाइन को सम्बन्ध मा। नियमहरु को बारे मा प्रकाशित हुन जारी छ ट्वीट गर्न उत्तम समय र धेरै ट्विट गर्दै। मैले यी परीक्षण गर्ने निर्णय गरें नियमहरू। वास्तवमा, मैले एउटा सानो परीक्षण मात्र गरेन, मैले ट्विटरमा उडाएँ।
मलाई गलत नबनाउनुहोस्
के म चर्को कोठामा चिच्याउन मनपराउँछु? अहँ, के म आफूलाई दोहोर्याउन मनपराउँछु? हैन… मँ यसलाई बिलकुलै घृणा गर्छु। र म निश्चित छु कि केहि व्यक्तिले मलाई भन्नु पर्ने छ कि म दिने सल्लाहले समस्यामा जोड दिनेछ र यसलाई समाधान गर्न मद्दत गर्दैन।
समस्या म जस्तो व्यक्ति होइन। समस्या कोठा हो। धेरै बर्षको लागि हरेक दिन, म ट्विटरभरमा सक्रिय रूपमा भाग लिएँ र मूल्य, मनोरन्जन, सहायता र कुराकानी प्रदान गर्ने प्रयास गरें। अधिक समय, यद्यपि, म ट्विटरबाट थकित भएको छु। म मेरो फिड खोल्छु र कुराकानीको एक सानो प्रतिशत मूल्यको छ।
लगभग हरेक दिन म एक स्प्यामर ब्लक गर्छु। जब म तिनीहरूको पृष्ठमा हेर्छु, तिनीहरूसँग सयौं पटक दोहोरिएको सन्देश छ। गम्भीरतापूर्वक, ट्विटरको लागि खाताहरूमा फिल्टर राख्नु कत्ति गाह्रो छ कि उनीहरू आफ्नो सन्देश बारम्बार दोहोर्याइरहेका छैनन् भनेर?
यसैले, जबसम्म ट्विटरले ट्विटर मार्फत साझेदारी गरिएको जानकारीको गुणस्तर र मात्राको बारेमा केहि गर्न निर्णय गर्दैन, तबसम्म मैले यसलाई तोड्ने निर्णय गरें नियमहरू मेरो सामाजिक मिडिया सहकर्मीहरूको। ओह ... र यो काम गर्‍यो।
प्रत्येक घण्टा ट्विट गर्दै, २ 24 घण्टा एक दिन
जेनले मलाई एक महान WordPress प्लगइन भनिन्छ परिचय दिए पुरानो पोस्ट रिभाइभ गर्नुहोस्। त्यहाँ एक नि: शुल्क संस्करण छ, म अत्यधिक अविश्वसनीय प्रो संस्करणमा समावेश अतिरिक्त सुविधाहरूको लागि तिर्न सिफारिस गर्दछु। संस्करणसँग एक टन थप सुविधाहरू छन् र तपाईंको सामग्रीलाई धक्का दिने क्षमता वृद्धि गर्दछ एक विशेष छवि को साथ सीधा WordPress बाट। प्लगइनले पनि यसको लागि अनुमति दिन्छ बिट.ली एकीकरण ताकि तपाईं साझा लिंकबाट क्लिक दर को माध्यम मापन गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ कसरी ट्विटर कार्ड देखा पर्दछ को एक उदाहरण छ
हाम्रो नयाँ साइट ... र हाम्रो नयाँ संसाधनहरू जाँच गर्नुहोस् http://t.co/UWExub2Dy7 #content # खोज शब्द pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
- मार्केटिंग टेक्नोलोजी (@martech_zone) जुन 24, 2015
मैले ट्विटरमा गत बर्षको हरेक घण्टामा अनियमित सामग्री पोष्ट गर्न प्लगइन सेटअप गरें। जबकि म एक दिन २ देखि updates अपडेट पोष्ट गर्छु, अब म दिनमा २2देखि times० पटक प्रकाशित गर्दछु। त्यो धेरै हल्ला संग, तपाईं सोच्नुहुन्छ कि म मेरा सबै अनुयायीहरू हराउनेछु र ट्या engage्कमा मेरो सment्लग्नता चलाउनेछु। होईन।
धेरै कुरा चिह्नको नतिजा
तथ्या !्कहरू झुठो हुँदैन र मेरो ट्विटर एनालिटिक्स साथै मेरो साइटको गुगल एनालिटिक्सले मलाई भन्दै छन् कि यो एउटा अचम्मको चाल हो! यहाँ एक ब्रेक डाउन छ:
सगाई दर ०.%% बाट २.१% सम्म!
ट्वीट प्रभावहरू यूपी १ 159.5 .322,000।%% बाट XNUMX।
प्रोफाइल भ्रमण यूपी १ 45.6 .2,080।%% बाट XNUMX।
अनुयायी २१ 216 देखि ,२,42,600०० सम्म।
छुटहरू यूपी १ 105.0 .900।%% बाट XNUMX।
लिंक तपाईलाई लिंक गर्दै यूपी १ 34.3 .6,352।%% बाट XNUMX।
ट्विटरबाट साइट ट्राफिक यूपी २238.7..1,952% बाट १ XNUMX .२ भ्रमणहरू।
म निश्चित छैन कि म यी तथ्या with्कहरूसँग कसरी बहस गर्न सक्छु। मैले अनुयायीहरू गुमाइनँ, मैले अनुयायीहरू प्राप्त गरें। मैले सगाई हराएको छैन, यो चार गुणा छ। मैले साइट भ्रमण हराएको छैन, उनीहरूको दोब्बर भयो। प्रत्येक एक मेट्रिक तथ्यलाई औंल्याउँछ कि, व्यापक रूपमा प्रकाशित ट्वीटको संख्या बढाउँदै, मैले ट्विटरमा मेरो प्रदर्शनमा सुधार ल्याएको छु।
किन? यो एकदम स्पष्ट देखिन्छ कि, म केवल मेरो हालको अनुयायीहरूलाई पनि कष्ट दिइरहेको छैन, मेरा ट्वीटहरू अधिक देखिएका छन्, अधिक रिट्वीट गरिएको छ र थप क्लिक गरिएको छ। यदि मैले एक सादृश्य बनाउनु पर्छ भने, यस्तो हुन सक्छ कि तपाईं व्यस्त ट्राफिकमा सडकमा ड्राईभ गर्दै हुनुहुन्छ र एउटा ट्वीट बिलबोर्ड हो। तपाईको बिलबोर्ड हेर्ने ट्राफिकको सम्भावना एकदम पातलो छ। तर यदि तपाईले प्रत्येक माईलमा बिलबोर्ड राख्न सक्नुहुन्छ भने, हेर्ने संभावनाहरू अझ राम्रो हुन्छ।
मेरो कुरा सुन्नुहोस्!
ट्विटरमा तपाईको आवाजलाई क्र्याक गर्न मेरो उदाहरणमा भरोसा नगर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि म अधिक प्रायः मानको सामग्रीको साथ ट्विटर कार्डहरू साझेदारी गर्दैछु। म प्रति दिन एक पटक भन्दा बढि समान सटीक ट्विट साझेदारी गर्न पनि डराउँदिन। सम्भावना यो छ कि तपाईका अनुयायीहरूले यसलाई एक भन्दा बढि देख्दैनन्। तपाईंको ट्विटर प्रकाशन दर डबल गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् यसले तपाईंको कसरी प्रभाव पार्छ विश्लेषण। यदि यसले काम गर्दछ भने यसलाई फेरि दोब्बर बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। मलाई टिप्पणी दिनुहोस् कसरी जान्छ मलाई थाहा दिनुहोस्।
प्रकटीकरण: My पुरानो पोस्ट रिभाइभ गर्नुहोस् लिंक एक सम्बद्ध लिंक हो। मलाई यो धेरै मनपर्‍यो कि मैले उनीहरूसँग साझेदारीको लागि तुरून्त साइन अप गरें।
टैग: अटोपोष्टपुरानो पोष्ट पुन: जीवित पार्नुहोस्पुरानो पोष्ट प्रो लाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्कार्यक्रम वर्डप्रेस सामाजिकसामाजिक वर्डप्रेस एकीकरणtwitterWordPress सामाजिक
कहिले तपाइँ तपाइँको लोगो पुनः डिजाइन गर्नु पर्छ?
ट्विटर र फेसबुकले आधुनिक समयमा संवाद गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ…।